१७ देखि ८९ वर्षका ग्राहकलाई यस्तो सल्लाह दिन्छन् ‘सेक्स थेरापिस्ट’
पिटर स्याडिंग्टन एक ‘सेक्स थेरापिस्ट’ हुन् । उनी र उनका ग्राहकबीच भएका कुराकानी गोपनीय हुन् । उनी आफ्ना ग्राहकका बारेमा कुरा गरेर उनीहरुको विश्वास तोड्न चाहदैनन् । उनले बताएको कहानी एक सेक्स थेरापिस्टको रुपमा युवाहरुसँग गरिएको उनको काममा आधारित छ । पढ्नुहोस् उनकै शब्दमाः
म मानिसहरुको उनीहरुको निक्कै नीजि, नितान्त व्यक्तिगत कुरामाथि चर्चा गर्छु, तर उनीहरुलाई मेरोबारे केही पनि थाहा छैन र यो काम यसरी नै हुन्छ । म एक सेक्स थेरापिस्ट हुँ, त्यसैले मानिस मकहाँ आफ्नो यौनसम्बन्धी समस्या लिएर आउँछन् । यदि कुनै ग्राहक मसँग ‘के तपाई विवाहित हो ?’ भनी सोध्छन् भने म जवाफमा ‘हो’ भन्छु । यी कुरा लुकाउनु निक्कै अनौठो हुनेछ । त्यसो त म सबै कुरालाई व्यावसायिक रुपले गोप्य नै राख्छु । म मानिसहरुसँग उनीहरु को थेरापिस्टको रुपमा कुरा गर्छु, न कि उनीहरुको साथी जसरी ।
पक्कै पनि, ग्राहकलाई सहज महशुस गराउन उनीहरुसँग केही हल्का–फुल्का कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ, यी सबै कुरा उनीहरुको समस्याको समाधान खोज्ने खाली एक हिस्सा मात्रै हो । जुन ‘क्लिनिक’मा म काम गर्छु, त्यो एक घरको बैठक कक्ष जस्तै छ । त्यहाँ खाली तीन आरामदायी कुर्सी छन्, एउटा मेरो लागि र अन्य दुई ग्राहकका लागि । त्यहाँ मेरो परिवारको कुनै तस्विर राखिएको छैन न त अन्य चीज नै । यसले ग्राहकसँग दुरी बनाई राख्न मद्दत मिल्छ । ग्राहकहरु कोही एक्लै आउँछन् भने कोही जोडी नै आउँछन् । केही वर्षअघि २९ वर्षीय रोब एक्लै आएका थिए, किनकि उनी आफ्नो नयाँ प्रेमिकासँगको यौन सम्बन्धलाई लिएर चिन्तित थिए । उनकी प्रेमिकालाई यी सबै कुरामा निक्कै अनुभव रहेछ, तर उनीसँग थिएन ।
उनी थेरापीमा आफ्नी प्रेमिकालाई सहभागी गराउँन चाहँदैन थिए, किनकि उनी यसलाई लिएर लजाइरहेका थिए । सेशनका दौरान मैले रोबलाई सोधे – यदि केली(प्रेमिका) तपाईको ठाउँमा भएकी भए, तपाई पनि उसको अनुभवको कमीका कारण फरक दृष्टिबाट हेर्नुहुन्थ्यो ? उनले मेरो कुरा बुझे र उनले केलीलाई थेरापीमा सहभागी हुन सोधे । रोबको आत्माविश्वास पुनः फर्कियो । जुन कुराले रोबको मद्दत गर्यो, त्यो थियो – देखावटी गर्नुभन्दा आफ्नो चिन्तालाई लिएर पार्टनरसँग इमानदारी बन्नु । मेरा ग्राहक २० वर्षदेखि ४५ वर्ष उमेरका हुन्छन् । मानिस सेक्स थेरापीलाई लिएर त्यति डराएका हुँदैनन्, जति अर्को व्यक्तिले सोच्छन् । पछिल्लो १५ वर्षमा मैले सेक्स थेरापीका लागि आउनेमा कम उमेरका मानिस बढी देखे । यसका साथै जसले नयाँ सम्बन्धको सुरुवात गर्छन् उनीहरुको संख्या पनि बढेको छ । यौन समस्याका बारेमा कुरा गर्न अब वर्जित मानिदैन ।
मलाई लाग्छ – पोर्नको प्रभाव र यौनलाई लिएर बद्लिदो अपेक्षाका कारण मान्छे यस्ता समस्याको सामना गर्छन् र युवावस्थामा समस्याहरु लिएर आउँछन् । जुन संस्थानका लागि म काम गर्छु, उनीहरुका अनुसार, सन् २०१८ मा थेरापीका लागि आउने मानिसमा ४२ प्रतिशत ३५ वर्ष उमेरका थिए । मकहाँ आएकामध्ये सबैभन्दा बढी उमेरको ग्राहक ‘८९ वर्ष’का थिए । उनी एक नयाँ सम्बन्धमा आएका थिए । उनी र उनको पार्टनरबीच यौन सम्बन्धमा केही समस्या आइरहेको थियो । उनीहरु पहिले कुनै चिकित्सक कहाँ गएका थिए, तर उनीहरु यस उमेरमा यौन सम्बन्ध बनाइरहेका छन् भनेर अचम्ममा परे, जसका कारण उनीहरुको समस्याको समाधान हुन सकेन । सेक्स थेरापीका लाग मकहाँ आउनेमा धेरैजसो मानिस पहिले नै कुनै चिकित्सक कहा पुगिसेकेका हुन्छन् । मानिसलाई आफ्नो नीजि समस्याबारे कुरा गर् नका लागि कसैको आवश्यकता पर्छ । धेरैजसो डराइरहेका हुन्छन् ।
धेरै जोडीलाई लाग्छ – आफ्नो यौन समस्याहरु मेरो अगाडी देखाउनुपर्छ । तर, यस्तो होइन । मेरो सबैभन्दा कम उमेरको ग्राहक १७ वर्षको थियो, जसलाई यौन सम्बन्ध बनाउनमा समस्या भइरहेको थियो । यसकै कारण उनीहरुको ‘ब्रेकअप’ भयो । उनले निक्कै प्रयास गरे, तर समस्य समाधान भएन । यस अघि उनी एक चिकित्सककहाँ गएका रहेछन् । चिकित्सकले उनको उमेर सानै भएकाले यस्तो भएको र पछि गएर यो समस्या आफैँ जाने बताएछन् । तर, पनि ऊ मकहाँ आयो । त्यस समय उनी निक्कै चिन्तित थिए । सेशनका दौरान उनको अनुहार निन्याउरो नै थियो । हरेक सेशन फरक हुन्छ । यस्तो मामिलामा हामी धेरैजसो ‘यौन शिक्षा’ दिने काम गर्छौ । चित्रको माध्यमबाट समस्यालाई बुझाउने प्रयास गर्छौँ ।
मैले ती किशोरको मद्दत गरे । उसको डर नै उसको समस्याको कारण बनिरहेको थियो । उनलाई घरमा तीन पटक ‘इरेक्सन’ गर्न सल्लाह दिए ताकि उसले फेरी गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास आओस् । विस्तारै–विस्तारै उनमा आत्मविश्वास आउन थाल्यो र जम्मा ७ सेशनमा उसको समस्या भाग्यो । थेरापिस्ट बन्नअघि मैले विशेष शैक्षणिक आवश्यकता पर्ने बच्चाहरुका लागि बनेको एक आवासीय विद्यालयमा काम गरेको थिए । बच्चाका लागि सही विद्यालय खोज्नु र उसको भविष्यको चिन्ताका कारण कतिपय मानिसको सम्बन्धमा धेरै दबाब आएको मैले देखे । सायद, म उनीहरुका लागि केही गर्न सकेको भए ! जागिर बाहेक मैले दुई वर्ष ‘जोडी परामर्श’को तालिम लिएको थिए । परामर्शका दौरान उनीहरुको समस्या यौनका साथसाथै भावनात्मक पनि हुन्छ । त्यसैले, सेक्स थेरापी पनि दिनुपथ्र्यो, ताकि हरेक स्तरमा उनीहरुको मद्दत गर्न सकियोस् । म्याट र एलेक्स एक समलिंगी जोडी थिए ।
पहिलो सेशनमा दुवै निक्कै हिच्किचाइरहेका थिए । उनीहरु बारम्बार आफ्नै कुर्सीमा ठाउँ परिवर्तन गरिरहेका थिए र मेरो प्रश्नको उत्तर दिनबाट बच्न खोजिरहेका थिए । उनीहरुको समस्या ‘इरेक्शन’ सम्बन्धी नै थियो । जति पनि पुरुष मकहाँ आए, उनीहरुमा इरेक्शनसँग जोडिएको र शीघ्रस्खलनको समस्या थियो । मैले म्याट र एलेक्सलाई एक स्पर्शी व्यायामको सल्लाह दिए । मेरो उद्देश्य उनीहरुमा उत्तेजना उत्पन्न गर्नु थियो । उनीहरुले विस्तारै बुझे कि कसरी एक–अर्कालाई बुझ्न सकिन्छ । दुवैले निक्कै मेहनत गरे र अन्त्यमा म्याटको आत्मश्विास बढ्यो । उनीहरुले पछि विवाह गरे । मेरा साथीहरु मेरा कामलाई निक्कै रोचक मान्छन् । आफूलाई ‘सेक्स थेरापिस्ट’ बताउँदा मान्छेमा तपाईको कुराप्रति एक प्रकारको उत्सुकता जाग्छ ।
केही साथीहरु मसँग यौन सम्बन्धबारे कुरा गर्नमा केही असहज महशुस गर्छन्, तर केही निक्कै आरामले आफ्नो यौन सम्बन्धको समस्याहरुका बारेमा बताउँछन् । मेरा साथीहरुले उनीहरुले आफ्नो समस्या बताउँदा व्यावसायिक सम्बनध बन्नसक्छ त ? भनी सोधेका थिए । मैले होइन भने । म आफ्नो काम घरमा लिएर आउँदिन र तपाई आफ्नो साथीभाई तथा परिवारका सदस्यसँग चिकित्सकको सम्बन्ध बनाउँन सक्नुहुन्न । यदि मलाई सुरुमै समस्याको पहिचा न गरेर अलग–अलग गर्न आउँदैन भने म यस कामलाई गर्न सक्दिन । मैले थुप्रै अप्ठ्यारा र चिन्तित बनाउने कहानीहरु सुनेको छु । तर, यी सबै कहानीबाट प्रभावित हुनबाट बच्नुपर्ने हुन्छ ।
ग्राहकका लागि दुख वा खेद महशुस गर्दा केही मद्दत पुग्दैन । तर, कहिलेकाही दुखले भरिएको क्षणमा खुशीका पल पनि आउँछन् । कहिलेकाही मलाई थेरापीपछि जोडीको धन्यवाद सन्देश र कार्ड पनि आउँछ । एक जोडीले १२ वर्षपछि ‘धन्यवाद’ मलाई सन्देश पठाए । उनले आफ्नो एक बच्चाको नाम मेरो नाम राखेका रहेछन्, जो एक सम्मानको कुरा हो । तपाई यस काममा धेरै पैसा कमाउनुहुन्न, तर यस काम गर्नुको एक महत्वपूर्ण कारण छ । मानिसहरुले तपाई सल्लाह मानेर उनीहरुको जिन्दगी परिवर्तन भइरहेको हेर्न पाउनु एक असाधारण अनुभूति हो । (बिबीसी)